Amadoda angama-10 ekufuneka abe khona ebomini bakho
Ukuba ukholelwa i-anecdote endala, ebomini nganye yesini esilungileyo kufuneka ibekho kuphela abathathu abameli besondo esomeleleyo - indoda, umthandi kunye nomzimba wezintlu. Namhlanje sinqume ukuhlaziya olu luhlu ngokusekelwe kwizinto ezikhoyo kwaye sifumene ukuba amadoda alishumi kufuneka abe kufuphi nomfazi.
Uninzi lukholelwa ukuba akukho tyenziswa kweenkokheli. Ezi zihlazo nje, imiyalelo, zibiza i-carpet kunye nezohlwayo. Kwaye ukuba uyayibheka imeko ukusuka kwelinye icala kwaye ucinge ukuba ingaba yinto ebalulekileyo, ungabi kufuphi nomphathi wesilisa? Ngaba unesiqiniseko sokuba uza kunika ixesha elininzi ngokubonakala kwakho? Indoda enjalo iyala. Nangona ungazibikeli ngolu hlobo, uya kususa ngokukhawuleza amathuba okuwela kwifomu engafanelekanga phantsi kweso sigxina somphathi. Ugcina ukuhamba kwakho, ungabhemisi eofisini, ngexesha lokusebenza uzame ukuxoxa ngeentengiso, uchungechunge oluthandayo lweTV, iingxaki kunye noninazala, kunye neentsilelo zothando lwakho. Ngomgcini wesifazana, ewe, eninzi imibuzo, unokufumana ulungelelaniso olufanayo, kodwa kungekhona kumntu. Ngoko ke, inkokeli yindoda iyinkuthazo, kwaye ngakumbi xa uvelwano, unamandla ngakumbi lo khuselo.
Maxa wambi kukuhle ukukhala kumntu ehlombe lakho kwaye uthethe ngeengxaki zakho. Kwaye ngeli thuba uya kuzinqabisa kwaye athi yonke into iya kuhamba kakuhle. Kwaye, ngokubalulekayo, ungasebenzisi ulwazi olufunyenwe nxamnye nawe (ngeendlela, intombi intombazana ikwazi ukwenza oku). Ngaphezu koko, kumnandi kakhulu kwi-cosmonaut xa umzuzu wezinyembezi zakho ubeka isandla esomeleleyo somntu ontloko - kwaye akukhathazeki nantoni na ukuba umnini wesandla unxulumene kuphela ngumhlobo. Kwaye ukuba uhanjelwe ngcamango yokuba lobu buhlobo buya kuguqulwa ngothando, yima kwaye ucinge ngenyameko.
Ukunxibelelana ngokulingana nomntwana kufundisa kakhulu. Okokuqala, iyimfashini. Okwesibini, kumntu onjalo unako ukufumana amava - kungekhona onke amantombazana angakwazi ukuwenza i-powder ingqondo yakhe kumlingane wakhe, njengokuba umlingani. Okwesithathu, sibonga kubo, siyakwazi ukubheka yonke into ukususela kwindlela yethu yokujonga ngayo. Okwesine, zikhuselekile ngokupheleleyo, kuba nokuba indoda enomona onomona ayiyi kuba nomona ngomhlobo wakho. Nangona kunjalo, akusiwo wonke umntu oya kuvunyelwa - abafazi, njengomthetho, abahlala behlahlisa abantu besilisa kunye nokuzama ngazo zonke iindlela ukuphepha ukulwa nabo. Okwesibini, ubudlelwane bezesondo buhlala bunzima kumabhinqa. Uza kuzama ukuzama ukulandela isenzo "sesigqirha" kuwe, kubuza umbuzo othi: "Andiyithandi na?". Ndikholelwe, kuyithakazelisa!
Ngeparadesi enhle kwindlu, kodwa kungekudala le ndawo iqala ukukhokelela ekubonakalisweni okukhulu. Okokuqala, siyathanda ukuzalisekisa zonke iibhaso zethu, kwaye sinika izipho kungekuphela kweeholide. Okwesibini, ukuba imoto yakhe exhaswayo ayikho umda wamaphupha. Umtsalane ocebileyo isilingo, esibonisa ukubetha. Ngokuqinisekileyo, kungcono ukuba ungacingi malunga nento ebangela ukupha kwakhe: ukuthetha phantsi kwenyanga ngokucacileyo akumthandi. Ngoko ukuba awuyi kuceba ukuza kwisigaba esiseduze, kufuneka ulahleke kuphela i-nevinnoflirtovat.
Ubomi bemihla ngemihla kunzima abantu, kodwa ngobudlelwane - ukuzibulala. Ngobuchule unokucima ukulamba kokomoya. Laba bafana baphambuka, ngamanye amaxesha bayakunqumla kwaye bahlale bengalindelekanga. Bayakwazi ukulungisa i-salute kunye nokushisa ngezobuqili babo. Ngendlela, iinjongo ezinjengezinto ezibonakalayo kunye ne-museum entsha. Abazibophelele ebomini babo "basekuqaleni", kodwa kusoloko kulungile ukukhumbula ukuba ebomini bakho kwakukho umntu onje, ngubani, mhlawumbi, sele eboniswe kwiTV!
Ingcali yeengqondo, phantsi kwefuthe le-Hollywood cinema, lide liye laphela ukuba yi-quirk ye "bourgeois". Babesabayika kwaye baqala ukuqonda, ngale ndlela: ukwenzela ukuba bazisombulule iingxaki zabo ngokwezemisebenzi kwaye bajongane nazo. Ngoko ke, imbono evela ngaphandle ihlala ifunekayo. Ukongezelela, namhlanje kunemfashini. Soloko ujika kuphela kwi-psychologist efanelekileyo kwaye wamkele iingcebiso zakhe ngokoqobo njengesikhokelo sokuthatha inyathelo elikhawulezayo. Kodwa musa nje ukuthandana nengqondo yakho yengqondo - le kinoshnyshriuk isoloko ihlaselwa ebomini kwaye ifumana ukulungelelanisa!
Nantoni na into abayithethayo, abalungileyo beebhokhwe, iindwendwe kunye nabaseclisti bahlala besilisa. Bona into engabonakaliyo nayiphi na ibhinqa. Ukubonakala kwindoda yesigxina kuyimfuneko nje. Umntu othandekayo akahlali ekwazi ukuqonda zonke iinguqu kunye nezinguqu ezincinane kwi-intombi yakhe. Eyona nto ibhetele, unako ukucima "into ekhangelekileyo", kwaye ekugqithiseleyo - "okokuqala, waya ngaphezulu." Ngoko inkosi enhle ixabisa ubunzima bayo kwigolide. Kwaye naziphi na izinto akudingekile ukuba uqale umcimbi kunye nomntu onjalo, kuba izaveli zinendlela yokuphela. Abameli be-Amnogie besondo esomeleleyo abanqweneli ukuqhubeka bexubana nabo babo be-intombi, oko kuyasebenza kwintsebenziswano yobugcisa.
Kufuneka ngaphandle kokungafani! Omnye unomzalwana ophezulu, kodwa umntu akenzi. Emva koko simele sibheke indoda ethembekileyo eneenkcukacha ezinzima. Uhlala ehlangula, naliphi na xa umbuza ngaye. Akaze abuze imibuzo engadingekile kwaye akayi kumangaliswa nantoni na. Kuya kuba luncedo kakhulu ukuphatha zonke iinkcazo, kunye neengcebiso zayo yi-laconic, izenzo zilandelelana kwaye zinengqiqo. Emva kwakhe njengodonga lwamatye, oko kukuphela kwothando kuphela. Kufanelekile ukuba sicinge ukuba ukuba ufuna ukuba ohmurit umntu onjalo, uya kuba nengqiqo kwaye akanakwenzeka ekhaya.
Kwimidlalo ye-cinema yaseNtshonalanga ungabona imigangatho "yabo". Phantse wonke umntu akanaloo-arhente kunye nababhanki. Akunakucelwa ukuba siya kuba neengxaki ezinjalo, kodwa ngoku ziimeko kuphela. Ngakolunye uhlangothi, ukuboleka sekude kube yinto eqhelekileyo, kwaye imimiselo yezomthetho kufuneka ijongane nayo. Kungenxa yeso sizathu, ingcamango enhle isondeleyo ngumcebisi oqhelekileyo, apho ungakwazi khona naluphi na ixesha ukuya kwimeko engxamisekileyo. Ulwazi olunjalo luhlala luncedo, ngoko kufuneka luxhaswe. Ngendlela, umntu kule ndawo okanye loo mbutho akayi kuba yinto engcolileyo, kuba ebomini bethu bonke bahlala bekhona.
Iipasiphile ezikhethekileyo zamadoda. Kutheni sifuna ngokwenene amadoda - ihlala iyimfihlakalo. Uninzi kunokwenzeka, izilwanyana zoshishino kunye neendlela zokutshatyalaliswa. Ngaphambi kokuba "ugcine i-hearth" kuyimfuneko yokwakha. Ngelinye igama, indoda iyimfuneko, ukuba kungenxa yesizathu sokuba ufuna ukuxabisa inkululeko, ukuzimela, kwaye ube nethuba lokuxhatshazwa ngokugqithiseleyo kwindoda engxolongo. Ngendlela, indoda ngayinye iyazibophelela kuqeqesho olufanelekileyo. Nangona abanye banokufumana ulonwabo lwentsapho, kuba kufuneka kubekho amadoda afanelekileyo kuzo zonke iimeko, kungekhona nje i-vkinofilmah.
Ungaziqonda njani umfazi?
Amadoda kunye neemfuno zabo zesini kunye namathuba
Isilinganiselo samadoda amaninzi anothando kwihlabathi
Kuthekani ukuba ndithandana nomfana othanda omnye
Mkhohlise umntu, esithi uyakhulelwa
Ubuhlobo obunzulu bokuqala phakathi komfana nentombazana
I-Horoscope ye-Capricorn-abafazi ngo-Oktobha 2016
Ukuqiqa ngeenkwenkwezi ngeenkanyezi - ukubikezela kwexesha elizayo
Ziziphi na iileta L ne-M ezandleni: Izifundo ze-Chiromancy
Siphila ngokuvuya: imigaqo emihlanu yokuqinisa umzimba
Inkqubo yobuhle ka-Anna Kournikova: Imithetho emithathu kulabo abafuna ukujonga zonke i-100!
I-Curd Cake Final
Ngaba ama-vibro-massagers anokunciphisa umzimba?
Umphunga omnandi we-chilli